Noqo China Professional dhalisa ogsijiin kiimiko ee warshadda suuqa Peru iyo soo saarayaasha |HRF
Kiimikada dhalisa oksijiinta xirfadleyda ee suuqa Peru
PSA (Cadaadiska Swing Adsorption) Tiknoolajiyada Kacaan ee Kala Goynta Hawada Non Cryogenic iyohawadaFarsamada Jiilka waxay isticmaashaa darajada gaarka ah ee ZMS ( Zeolite Molecular Sieve).
Hawada isku xidhan waxa la sii maraa module Twin Tower PSA oo ku xidhan is bedel toos ahKa dib marka la soo maro hawo qaboojiye ah ayaa qallajisa.Hawo qallalan oo ciriiri ah ayaa hadda la xiriiri doonta sariirta shaandhada molecular Zeolite (ZMS).Zeolite Molecular Sieves waa darajo gaar ah oo adsorbent ah kaas oo leh hantida la doorbidayo xayeysiinta molecules nitrogen.Waqtiga hal munaarad ayaa ku hoos jira wareegga wax soo saarka nitrogen, halka munaaradda kale ay mareyso dib u cusbooneysiin taas oo lagu gaaro niyad-jabka munaaradda ilaa cadaadiska atmospheric.Ka baxaysahawadagaaska waxaa loo diraa weel qalliin halkaasoo cadaadiska ugu yar lagu hayn doono iyadoo la kaashanayo Mabda'aha cadaadiska dhabarka.
Shirkadu waxay ku siin kartaa PSA VPS nitrogen warshad, warshad hawada PSA, PSA sare PSA cadaadiska adsorption hawada, PSA cadaadis adsorption sare-nadiifinta warshad hydrogen, hawada duminaysaa warshad hydrogen, qalabka hydrogen-nitrogen, qalabka sifaynta gaaska, soo kabashada gaaska qalabka, nadiifinta hawada.
Waxaan ku siin karnaa noocyo kala duwan oo gaaska gaaska ah sida waafaqsan shuruudaha macaamiisha.Waxaan sidoo kale ku siin karnaa noocyo kala duwan oo gaas ah sida waafaqsan shuruudaha macaamiisha, waxaanan siinaa macaamiisha nitrogen, hawada iyo qalabka wax soo saarka hydrogen iyo qalabka la xidhiidha. Waxaan siin karnaa macaamiisha dayactirka ee nitrogen, hawada, hydrogen iyo qalabka la xiriira, tababarka farsamada iyo la-talinta farsamada, iwm Shirkaddu waxay soo saartaa qalab si ballaaran loo isticmaalo ee non-ferrous, biraha birta ah, daaweynta kulaylka, warshadaha kiimikada, warshadaha batroolka, warshadaha caag ah, caag warshadaha, warshadaha elektarooniga ah. , biirka iyo cabitaanka, ilaalinta cuntada cusub, warshadaha biraha, warshadaha galaaska, warshadaha dhuxusha, aerospace taageero technology iyo warshadaha kale.Qalabka waa mid deggan oo la isku halayn karo.
Main: Mashiinka hawada Highland, Mashiinka sahayda hawada sare kala firdhiyo, PSA cadaadis adsorption cyanide variable, PSA cadaadis adsorption heerkulka PSA VPS warshad hawada, PSA VPS-nadiifinta sare warshad hydrogen, Qalab kakagan warshad radon qalab, hydrogen-nitrojiin qalabaynta, Qalabka sifaynta gaaska, qalabka soo kabashada gaaska, qalabka gaaska hawada sida proje sifaynta gaaska.
Hore: 25 sano 3200mm SS spunmelt dhar aan tow lahayn samaynta khadka wax soo saarka mashiinka
Xiga: 99% nadiifinta darajada caafimaadka